Federalisma sy ny fomba fiasa
Iza no manana fahefana?
Ny federalisma dia dingana izay ahafahan'ny governemanta roa na maromaro mizara fahefana amin'ny faritra misy azy.
Any Etazonia, ny lalàm-panorenana dia manome fepetra sasantsasany ho an'ny governemanta Amerikana sy ny governemantam-panjakana.
Ireo fahefana ireo dia nomena tamin'ny alàlan'ny fanitsiana taonjato faha-10, izay milaza fa "Ny fahefana izay tsy natolotra tamin'ny Fanjakana amerikana tamin'ny Lalàmpanorenana, na voarara amin'ny fanjakana, dia natokana ho an'ny Fanjakana na ho an'ny vahoaka."
Ireo teny 28 tsotra ireo dia mametraka karazana fahefana telo izay misolo tena ny fototry ny federalisma amerikana:
Fanambarana na "novolavolaina" fahefana: Ny fahefana nomena ny Kongresy Amerikana, indrindra fa ao amin'ny Andininy I, Fizarana faha-8 ao amin'ny Lalàm-panorenan'i Etazonia.
Mpiaro voatokana: Ny fahefana tsy nomena ny governemanta federaly amin'ny lalàm-panorenana ary natokana ho an'ireo firenena.
Firaisankinan'ny mpiara-miombon'antoka: Ny fahefana mizara ny governemanta federaly sy ny fanjakana.
Ohatra, ny andininy faha-8 ao amin'ny Lalàm-panorenana dia manome alalana ny kongresy amerikana sasany fahefana manokana toy ny fanangonam-bola, fanaraha-maso ny varotra sy varotra iraisam-pirenena, fanambarana ady, fananganana miaramila sy tafika ary ny fananganana lalànan'ny fifindra-monina.
Ao anatin'ny Amperimandrenta faha-10, ireo hery tsy voalaza ao amin'ny Lalàm-panorenana, toy ny fangatahana fahazoan-dalana mpamily sy fanangonana hetra fananana, dia anisan'ireo hery "voatokana" ho an'ireo firenena.
Miharihary mazava tsara ny tsipiky ny fahefan'ny governemanta Amerikana sy ny an'ny fanjakana.
Indraindray, tsy izany. Isaky ny mampihatra fahefana amin'ny governemantan'ny fanjakana ny fifandonana amin'ny lalàm-panorenana, dia miafara amin'ny adin'ny "zon'ny fanjakana" isika izay tokony hametrahan'ny Fitsarana Tampony matetika.
Raha misy fifandonana eo amin'ny fanjakana sy lalàna federaly toy izany, ny lalàna federaly sy ny hery dia manafoana ny lalàna sy ny fanjakana.
Angamba ny ady lehibe indrindra teo amin'ny sekta-zon'ny fanjakana dia natao nandritra ny tolona tamin'ny taona 1960 tany ho any.
Segregation: Ny ady lehibe indrindra ho an'ny zon'ny fanjakana
Tamin'ny taona 1954, ny Fitsarana Tampony tamin'ny fanapahan-kevitr'ireo manam-pahefana Brown teo aloha dia nanapa-kevitra fa ny fahasamihafana eo amin'ny sekoly tsy miankina mifototra amin'ny hazakazaka dia tsy manan-danja ary noho izany fanitsakitsahana ny fanitsiana faha-14 izay milaza fa: "Tsy misy fanjakana hanao na hampihatra lalàna izay hanaisotra ny tombontsoa na ny tombontsoan'ny olom-pirenen'i Etazonia, ary ny fanjakana dia tsy manaiky ny olona iray amin'ny fiainany, ny fahafahana na ny fananana, raha tsy misy lalàna mendrika, na mandà ny olona iray ao amin'ny faritra misy azy, ny fiarovana ny lalàna. "
Na dia izany aza, maro tamin'ireo firenena Tatsimo no nisafidy ny tsy hiraharaha ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Tampony ary nanohy ny fampiharana ny fanavakavahana ara-poko any an-tsekoly sy any amin'ny toeram-bahoaka hafa.
Ireo fanjakana dia nametraka ny toerany tamin'ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Tampony tamin'ny 1896 tao Plessy v. Ferguson. Anatin'ity tranga manan-tantara ity, ny Fitsarana Tampony, izay tsy misy afa- tsy vato tokana tsy manavakavaka , no nanapaka ny fanavakavaham-bolon-koditra dia tsy nandika ny Amintimiera faha-14 raha toa ka "mitovy tanteraka" ireo sehatra samihafa.
Tamin'ny Jona 1963, governoran'i Alabama George Wallace dia nijoro teo anoloan'ny varavaran'ny Anjerimanontolon'i Alabama izay nanakana ireo mpianatra mainty tsy hiditra sy hanohitra ny governemantan'ny federasiona mba hiditra an-tsehatra.
Taoriana kely tamin'io andro io dia nomen'i Wallace fangatahana i Asst. Mpisolovava Gen. Nicholas Katzenbach sy ny Guard Guardan'i Alabama izay mamela ny mpianatra mainty Vivian Malone sy Jimmy Hood hanoratana.
Nandritra ny ambiny tamin'ny taona 1963, ny fitsarana federaly dia nandidy ny fampidirana ireo mpianatra mainty hoditra ho any amin'ny sekolim-panjakana any atsimo. Na dia eo aza ny baikon'ny fitsarana, ary amin'ny 2% amin'ireo ankizy mainty hoditra any amin'ireo sekolin'ny fotsy hoditra teo aloha, ny Lalàna momba ny zon'ny sivily tamin'ny taona 1964 izay nanome alalana ny Departemantan'ny Fitsarana amerikana hanomboka ny fanavakavahana ara-tsekoly dia nosoniavin'ny Filoha Lyndon Johnson .
Ny tranga tsy dia lehibe, fa mety amin'ny endrika lalàm-panorenana momba ny lalàm-panorenana "zon'ireo firenena" dia nialoha ny Fitsarana Tampony tamin'ny volana Novambra 1999, raha nandray ny Jeneraly mpisolovava an'i Carolina Carolina Condon ny Lehiben'ny Fampanoavana any Etazonia Reno.
Reno v. Condon - Novambra 1999
Azo avela ho voavela ny Rain'ny mpanorina satria tsy manadino ny fiara misy azy ao amin'ny Lalàm-panorenana, fa raha manao izany izy ireo, dia nomeny ny fahefana hangatahana sy hanome alalana ny mpamily ho an'ireo firenena ao anatin'ny Amperim-pirenena folo. Izany dia mazava sy tsy misy ifandraisany, fa ny fahefana rehetra dia voafetra.
Ny departemantan'ny fanjakana amin'ny fiara (DMVs) dia matetika mitaky fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny mpamily mba hanome ny mombamomba ny olona, ​​anisan'izany anarana, adiresy, nomeraon-telefaona, famaritana fiara, nomerao ara-tsosialy , fanazavana momba ny fitsaboana ary sary iray.
Taorian'ny nahafantarana fa mpivarotra DMV maro no namidy ity vaovao ho an'ny olona sy ny orinasa ity, dia nanapa-kevitra ny Kongresy Amerikana ny Lalàna momba ny Fiarovana ny Fiarovana (1994) (DPPA), fametrahana rafitra fanaraha-maso izay mamaritra ny fahaiza-manaon'ny fanjakana hamoaka ny mombamomba ny mpamily raha tsy misy ny faneken'ny mpamily.
Raha mifanohitra amin'ny DPPA, ny lalànan'i Carolina Carolina dia namela ny DMV an'ny Fanjakana hivarotra ity vaovao manokana ity. Ny Jeneraly Condon Jeneraly Condon dia nametraka fitoriana milaza fa ny DPPA dia nanitsakitsaka ny fanovana ny Tenth sy ny faha-11 ao amin'ny Lalàm-panorenan'i Etazonia.
Ny Fitsaram-paritra dia nanohana an'i Carolina Atsimo, nanambara fa ny DPPA tsy mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny federalisma izay mifandanja amin'ny fizarazaran'ny fahefana eo amin'ny fanjakana eo amin'ny fanjakana sy ny governemanta federaly . Ny hetsika nataon'ny Fitsaram-paritra dia nanakana ny governemanta amerikana hampihatra ny DPPA any Carolina Atsimo. Io didim-pitsarana io dia notohanan'ny Fitsarana Ambony District Appeals.
Nanafatra ny fanapahan-kevitry ny Distrika ao amin'ny Fitsarana Tampony ny Reno Lehiben'ny Fampanoavana ao Reno .
Ny 12 Janoary 2000, ny Fitsarana Tampony Amerikanina, raha ny filazan'i Reno v. Condon, dia nilaza fa ny DPPA dia tsy mandika ny Lalàm-panorenana noho ny fahefana ananan'ny Kongresy Amerikana mba hifehezana ny varotra iraisam-pirenena nomena azy amin'ny Andininy I, Fizarana 8 , andininy faha-3 amin'ny Lalàmpanorenana.
Araka ny voalazan'ny Fitsarana Tampony, "Ny fampahalalam-baovao amin'ny fiara izay nampanan-tsain-tanana ny fanjakana dia ampiasain'ireo mpamatsy vola, mpamokatra, mpivarotra mivantana, ary ny hafa mandray anjara amin'ny varotra iraisam-pirenena mba hifaneraseran'ny mpamily miaraka amin'ny fangatahana manokana. Ny varotra ataon'ny orinasam-panjakana sy ny sehatra samihafa momba ny raharaha mifandraika amin'ny fiara fitaterana isam-paritra. Noho ny fisian'ireo mpamily, ny fampahalalana momba ny fiara dia ao anatin'ity toe-javatra ity, lahatsoratra iray momba ny varotra, ny fivarotana azy na ny famotsorana azy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ampy hanohanana ny fitsipiky ny kongresy. "
Noho izany, ny Fitsarana Tampony dia niaro ny Lalàna momba ny Fiarovana ny Fiarovana ny Tafika tamin'ny taona 1994 ary ny fanjakana dia tsy afaka mivarotra ny mombamomba ny mpanjifanay manokana raha tsy mahazo alalana izahay, izay zavatra tsara. Amin'ny lafiny iray, ny fidiram-bola avy amin'ireo vidiny very dia tsy maintsy atao amin'ny hetra, izay tsy dia tsara loatra. Fa, izany no mahatonga ny federalisma miasa.
Fankasitrahana avy amin'ny Kongresy nahazo fankatoavana tamin'ny Tantara
Toro-làlana sy fifanoheran'ny fiarovana sy fampiasana ny lalàna ho an'ny tsirairay
Pros & Cons-des-Accordes de Libre Libre
Mpitandrina ho an'ny Sekoly: Fisarahana ny Fiangonana sy ny Fanjakana
Monica Lewinsky mametraka ny lahatsorany ho marina
Ny fiantraikan'i Barack Obama tamin'ny fitondrana ny hetsika Birther
Pros and Cons of Obama's Package Package
Jay-Z / R. Kelly: Ny tsara indrindra sy ny ratsy indrindra amin'ny tontolon'ny samy any
Famaritana ho an'ny Fahrenheit sy Conversions Celsius
Inona avy ireo anaran'ireo antokon-kintana tranainy amin'ny teny latinina?
Asa vita amin'ny matematika - Manorata ora amin'ny ora fitsaran-taona
Ny foto-kevitry ny fanindrahindrana ny Bodisma
Ahoana ny fomba hampidirana volo ho an'ny Kayak
Manorata drafitra momba ny lesona - Famelabelarana anticipatory
9 Tsy maintsy mijery horonantsary Rodeo
Toyo Mitandrema amin'ny GSI-5 mandritra ny fotoana maharitra
Lisitry ny Mpanjaka Spartanina
Fitsipika tsy manam-pahataperana amin'ny etiônika
Mampiditra ny pronons amin'ny matoanteny mandrora
Ahoana ny fomba famandrihana ny sambon-jironao
5 Vavaka Kristianina ho an'ny fandriampahalemana
Ny Amerikana dia mitarika ny fiarovan-tenan'ny firenena
Inona moa ny endriky ny lalàna mifehy ny gazy?
Lisitry ny fitsaboana simia momba ny simia
Fihodinana Satsuma: Battle of Shiroyama
Inona no atao hoe EPS - Polystyrène Expanded
Fananana ara-panahy sy fanasitranana ao amin'ny Moonstone